कसले हान्यो दावा लामालाई गोली ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसले हान्यो दावा लामालाई गोली ?
काठमाडौं, बैसाख ६ । चैत २९ गते दावा लामामाथि भएको गोली प्रहार घटनाको सिसी टिभी फुटेज फेला पारे पनि गोली हान्ने को हो र कसले हान्न लगाएको भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
घटना लगत्तै लोप्साङ राइको नाममा प्रहरीलाई फोन गरेर घटनाको जिम्मेवारी लिइएको थियो ।
उनले गरेको कल नम्बर प्राइभेट रहेको र उनले आफू हङकङमा रहेको दाबी गरेका थिए । प्रहरीले यो रहस्याको गुत्थी खुलाउन सकेको छैन ।
घटनास्थलको दृश्य र गोली हान्नेको शारीरिक पोजिसनका आधारमा हतियार चलाउन अनुभवी व्यक्ति घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
ट्याग्स: dawa lama